Umhlaba Usezingeni Lamanje - Izindaba ezihamba phambili NAMUHLA
Ibhungu elineminyaka engu-14 ubudala lishaye ingwenya ebusweni libaleka ngemuva kokuba isilo sivalele ibhungu emihlathini sizama ukuyihudula yaze yashona.
June 2, 2022 por admin
Ibhungu lasinda ngokuyisimangaliso emihlathini yengwenya ngokuyishaya ekhanda. U-Om Prakash Sahoo, 14, ubenabangani bakhe emfuleni iKani eNdiya ngesikhathi isilo simdwengula ngaphansi kwamanzi samhudula washona. 1Ibhungu likwazile ukuphunyuka emihlathini yengwenyaIsikweletu: Alamy... ufunde kabanzi
Izigaba Izindaba Zokugcina Tags intsha, anos, donsa, Isilo, umfana, ingwenya, ngemuva, iyavala, phakathi, phunyuka, imihlathi, shaya, kuya phambili, ukufa, ingane, ukuze, Sus, i-trata Deja un comentario
Ibhungu lasinda ngokuyisimangaliso emihlathini yengwenya ngokuyishaya ekhanda. U-Om Prakash Sahoo, 14, ubenabangani bakhe emfuleni iKani eNdiya ngesikhathi isilo simdwengula ngaphansi kwamanzi samhudula washona. 1Ibhungu likwazile ukuphunyuka emihlathini ye ... ufunde kabanzi
Ngabalekela izihlobo zami zama-Amish lapho ngineminyaka engu-18
Umama okhulele e-Amish uveze ukuthi abesifazane nezingane bahlukunyezwa ngendlela enyantisayo ngokocansi futhi "benqatshwa" emindenini yabo uma bephula imithetho. Lapho u-Emma Gingerich oneminyaka engu-36 ubudala ebaleka okuwukuphela kwempilo ake waphila eneminyaka engu-18, wayenemfundo yebanga lesishiyagalolunye kuphela... ufunde kabanzi
Izigaba Izindaba Zokugcina Tags Amish, anos, lapho, Ukuphunyuka, umndeni, izihlobo, Nganginakho Deja un comentario
Imfihlakalo njengoba unjiniyela waseBrithani oneminyaka engama-37 edutshulwa washona nabangane bakhe ababili esitolo esikhulu saseMexico ngenkathi bethenga.
INDODA yaseBrithani idutshulwe yabulawa esitolo esikhulu saseMexico eduze kwabangane bayo ababili ngesikhathi abazali bayo abadidekile bethi 'isendaweni engafanele ngesikhathi esingafanele'. Unjiniyela wesoftware uBen Corser, 37, waseCornwall, udutshulwe ematasatasa e-Colima, entshonalanga neMexico, e… ufunde kabanzi
Izigaba Izindaba Zokugcina Tags abangane, anos, wabulawa, EBrithani, njengoba, uthenge, con, Amabili, Injini, I-Mexican, ngenkathi, imfihlakalo, esitolo esikhulu, ukudubula Deja un comentario
Ushaka 'weZombie' uhlasela inyamazane ngamasentimitha ukusuka kumtshuzi omangele
Isikhathi esesabekayo lapho ushaka "we-zombie" uhlasela inyamazane yakhe ngamasentimitha ukusuka kumtshuzi omangele, futhi bonke basho into efanayo. U-Euan Rannachan, 36, wayesesiqhingini saseGuadalupe, esiqhele ngamakhilomitha angaba ngu-200 ogwini lwezwe laseMexico, ngesikhathi kuvela ushaka omkhulu omhlophe futhi wahlala emanzini. … ufunde kabanzi
Izigaba Izindaba Zokugcina Tags ukuhlasela, emangele, Umtshuzi, amasentimitha, presa, udoki, AMAZOMBI Deja un comentario
UPutin welashelwa 'umdlavuza osezingeni eliphezulu ngo-Ephreli' njengoba 'ukuphela kungase kusondele' kundlovukayiphikiswa wase-Kremlin, kusho izikhulu zezinhloli zaseMelika.
OGULAYO ​​uVladimir Putin welashelwa umdlavuza osuqhubeke njalo ngo-Ephreli, kusho abaholi bezinhloli baseMelika. Kubikwa ukuthi izikhulu eziphezulu zithe abasizi eKremlin "babona sengathi ukuphela sekusondele" kulo ndlovukayiphikiswa waseRussia oneminyaka engu-69. 2 UMongameli waseRussia uVladimir PutinIsikweletu: AP 2Putin uhlangana no-Boris Titov, omele… ufunde kabanzi
Iyini i-rhinoplasty futhi yiziphi izinzuzo zayo?
June 2, 2022 June 2, 2022 por admin
Ngezizathu zempilo noma zobuhle, i-rhinoplasty iyindlela esebenzayo yokulungisa kabusha noma ukulungisa ikhala. Abantu abaningi ngokwengeziwe baphendukela kule nqubo ukuze baxazulule inkinga ethile yamakhala. Kodwa kuyini ngempela futhi yiziphi izinzuzo eziyinhloko? Isihloko sethu namuhla sihlose ukucacisa… ufunde kabanzi
Kuyini ukuthengisa futhi kwenzelweni?
Inzuzo yohwebo idlulela ngale kokuswela, njengoba kudingeka amasu afaka isandla kulokho okufiselekayo ukuba kufinyelelwe. Namuhla, ukumaketha kusebenzisa ulwazi oluhlukile olwamukelwe eminyakeni edlule ukuze kugqugquzelwe ukuthengwa kwamakhasimende. Ukuthengiswa kwezinkampani ku... ufunde kabanzi
U-Barack Obama uhola iPlatinum Jubilee yokuhlonipha iNdlovukazi evela emhlabeni wonke njengoba uPapa noMacron bethumela imiyalezo
UBARACK Obama uthe indlovukazi “ingikhumbuza ugogo wami” njengoba abantu abavela emhlabeni wonke behalalisela iNgonyama ngerekhodi layo leminyaka engu-70 yahlala esihlalweni sobukhosi. Le ndoda eneminyaka engu-96 ubudala iyinkosi yokuqala yaseBrithani ukugubha i-platinamu jubilee futhi abalandeli basebukhosini emhlabeni jikelele baye ... ufunde kabanzi
Umama wadlwengula esitimeleni ngumhloli wamathikithi nabanye abathathu ngemva kokuyengelwa ekilasini lokuqala
KUSOLWA ukuthi umama udlwengulwe esitimeleni ngumhloli wamathikithi namanye amadoda amathathu ngemuva kokuhujwa enqoleni yekilasi lokuqala. Umama osemncane wezingane ezimbili ushiye isihlalo sakhe sekilasi lezomnotho ngemuva kokuhlinzekwa ngegumbi elinomoya opholile ngesikhathi... ufunde kabanzi
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi1.358 Okulandelayo →
Umhlaba Usesimweni | 2022